उखु खानुको ७ आश्चर्यजनक फाइदाहरू
१. यदि तपाईं बिहानको समयमा कफी पिउनु हुन्छ भने, तपाईंले यो जान्न जरूरी छ कि यो समयमा विशेष गरेर बिहान ८ देखि ९ बजेको समयको आसपास स्ट्रेस हार्मोन कार्टीसोल चरम सीमामा हुन्छ । यदि यो समयमा तपाईं कफी पिउनु हुन्छ भने तपाईंको स्ट्रेस लेवल कम हुनुको वजाय बढी हुन्छ । २. यदि कुनै समयमा कफी पिउने बानी बसेको छ भने...
यदि कपाललाई बाउन्सी बनाउन चाहनुहुन्छ भने, यसरी प्रयोग गर्नुस् एलोभेरा
यदि आफ्नो कपाल मजबुत र स्वस्थ बनाइराख्न चाहनुहुन्छ भने एलोभेराको प्रयोग एकदमै लाभकारी हुन्छ । आउनुहोस् अब कपाल बाउन्सी बनाउनको लागि एलोभेराको प्रयोग कसरी बनाउने भन्नेमा जानकारी राखौं १. एलोभेरा हेयर मास्क– एलोभेरामा भरपूर मात्रामा भिटामिन ई पाइन्छ । यसैले यदि तपाईं अण्डा, कागतीको रस या कुनै पनि हेयर आयलमा मिसाएर कपालमा लगाउनुहुन्छ भने यो कपालको लागि एकदमै फाइदाजनक हुन्छ...
आफ्नो डाइटमा समावेश गर्नुस् यी ५ चीज र बच्नुस् ब्लड प्रेशरको बिमारीबाट
आजको समयमा कामको ज्यादा चापले गर्दा प्रायः मानिसहरू ब्लड प्रेशरको बिमारी भएका छन् । ब्लड प्रेशर एक समस्या हो । ब्लड प्रेशरको कारणले मानिसमा मुटुको रोग, स्ट्रोक, हर्ट अट्याक, जस्तो गम्भीर बिमारीको सधैं खतरा रहन्छ । यसको नदरअन्दाज गर्नु भनेको आफ्नै शरीरलाई हानी पु-याउनु हो । किनकि यसको कारणले हाम्रो मृत्यु पनि हुन सक्छ । यदि तपाईं पनि ब्लड प्रेशरको...
पिसाब रोक्नाले हुन्छन् यी पाँच बिमारी, जानकारी राखौं
हाम्रो शरीरको सबै एक्टिभिटिले शरीरमा असर पार्छ । चाहे यो हाम्रो आन्तरिक गतिबिधिले होस् या बाहिरी । भोक, तिर्खा, युरिन, ग्याँस निस्कनु आदि हरेक चिजको हाम्रो स्वास्थ्यमा महत्व हुन्छ । यसैले यसलाई रोक्नाले स्वास्थ्यलाई नोक्सान पुग्छ । हामी कैयौं पटक यस्तो परिस्थितिमा फस्छौं कि पिसाब आएर पनि जान पाउँदैनौं र यसलाई राकेर राख्छौं । यदि तपाईंको बानी पनि यस्तो छ...
यो फलले केवल ४ घण्टामा कम गर्छ तपाईंको कोलेस्ट्रोल
कोलेस्ट्रोल बढ्नाले न केवल तपाईंको मोटोपन बढ्छ यसले विभिन्न किसिमका रोगहरूलाई पनि निम्तो गर्छ । यसलाई कम गर्नको लागि अवश्य पनि तपाईले विभिन्न किसिमका उपायहरू गर्नुहुन्छ होला । तर के तपाईंलाई यो कुरा थाहा छ कि ओखरले तपाईंको कोलेस्ट्रोल कम गर्छ । एक अनुसन्धानमा यो कुरा सावित भएको छ लगभग एक मुठ्ठी ओखर खाँदा चार घण्टाको बीचमा नै यसले दिने...
ज्यादा चिनीको सेवनले आउन सक्छन् यी सात समस्या, ख्याल गरौं
१. मोटोपन आफैंमा बिमारी नभएपनि कैयौं बिमारीको जड चाहिँ हो । जब हामी चिनी खान्छौं तब हाम्रो शरीरमा लीपोप्रोटिन लिपोज बन्छ । जसको कारणले हाम्रो कोशिकामा फ्याट जम्मा हुन थाल्छ । जसले गर्दा मोटोपनले हामीलाई दुख दिन्छ । २. जब हामी बढी मात्रामा चिनीको प्रयोग गर्छौ तब यसको असर हाम्रो प्रतिरक्षा शक्तिमा पर्छ । जसले गर्दा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमता...
खाना पछि टहल्नु शरीरको लागि एकदमै फाइदाजनक
अधिकांश व्यक्तिलाई खाना खाएपछि सुस्ती महसुस हुन्छ । जसको कारणले व्यक्ति आराम गर्न मन पराउँछन् । तर, मानिसलाई यो कुरा थाहा छैन कि खाना खाएपछि आराम गर्नाले वा सुत्नाले हाम्रो स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पर्छ । अनेक किसिमको रोगबाट बच्न र आफूलाई फिट राख्न खाना खाएपछि टहल्नु फाइदाजनक हुन्छ । अब जानकारी लिउँ कि खाना खाएपछि टहल्नु किन फाइदाजनक हुन्छ भनेर...
विना दूधको यानि कालो चिया पिउनाले हुने सात फाइदाहरू
विश्वमा चिया पारखीहरू धेरै छन् । विभिन्न किसिमका चियाका पारखीहरू भेटिन्छन् । हरेक प्रकारका चियाका आ आफ्नै विशेषताहरू हुन्छन् । कालो चिया पिउनाले हुने फाइदाहरू १. हृदयको लागि फाइदा– कालो चिया मुटुको लागि एकदमै फाइदाजनक मानिन्छ । दैनिक एक कप चिया पिउनाले मुटुलाई स्वस्थ बनाइराख्छ । यसमा पाइने फ्लेवेनाइड्स एलडीएलले कोलेस्ट्रोललाई कम गर्छ । यसको अलावा कालो चियाको प्रयोगले मुटुको...